Imimangaliso kwiPolly-Ikhabhathi yeNtsomi
I-12'x12' yeFairy Tale Cabin ibonakalisa imifanekiso eqingqiweyo esasiyiphupha sisengabantwana. I-Rustic ngokwendalo enekhitshi epholileyo ezivayo, ehleli phakathi kwehlathi labefundisi. Ngaphakathi kukho iibhodi ezibuyiselweyo, imiqadi kunye ne-driftwood. Kukho ibhedi egcwele abantu ababini, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa yokumisa encinci. Ikhitshi ine-confection burner / microwave, i-oveni yetoaster kunye nefriji encinci. Igqunywe encotsheni yeNduli yePolly, kunye nasebumelwaneni iMimangaliso kwiPolly Rental Cottage, bobabini babelana ngepropathi yeehektare ezi-4.
Intelekelelo idubula phezulu njengamakhowa ... Ilungele abahambi abangatshatanga, abahambi ngebhayisekile, abakhweli, abathandanayo kunye neeLancers. Okanye mhlawumbi umzali obalekayo okanye ukubaleka nje ukuya kumahlathi omlingo aseBelfast. Ukubaleka emhlabeni kunye nazo zonke izibonelelo ozifunayo ukuze ukhululeke. Iigadi kunye nendawo yangaphandle ihlala iguquka njengoko singena kwisizini yethu yesine. Le yikhabhathi eyi-12' x 12' (240 square feet) Inazo zonke izinto onazo ukuze ukhululeke kodwa sicebisa le ndlu kubahambi abakhululekileyo kwindawo encinci :)
Izinto eziluncedo ezikufutshane:
-Coopers Red and White Convenience - 3 minute drive - Le ndawo ithwala uninzi lwezinto ezisisiseko - igesi, utywala, igrosari, ideli kunye nenyama yasekhaya, imveliso, iimpahla ezibhakiweyo njl.njl.
-I-Chuck Wagon-Indawo yokutyela enkulu yasekhaya/imarike yamafama/ipaki yabantwana eyonwabisayo-imizuzu emi-3 yokuqhuba (iqhutywa ngexesha lonyaka)
-Ikhosi yeGalufa yaseBelfast Highland Greens - imizuzu emi-5 yokuqhuba
-Beach ngaphakathi 5-10 imizuzu drive
-Belfast Mini Mills - Ishishini elimangalisayo lendawo elinendawo enkulu yevenkile ngaphambili yezipho okanye izikhumbuzo
-Trans Canada Highway - 3 imizuzu drive
IBelfast yidolophu enoxolo enemvakalelo eyomeleleyo yoluntu egcwele intaba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. Ndiyakuthanda ukuhlala eBelfast. Inobubele kakhulu, ichumile kwaye yamkelekile. Kukho amashishini amakhulu asekuhlaleni afana nala:
I-Belfast Mini Mills (izinto ezithandekayo zezipho okanye izinto ezigcinwayo), iChuck Wagon Restaurant/Farmers Market/Kids Fun Park, iBelfast Highland Greens Greens Course, iCoopers Red and White Convenience, iKro kwiSky Art Studio, iPoint Prim Chowder House, iPoint Prim I-Lighthouse, i-Pinette Provincial Park, njl. Iilwandle ezintle zichaza i-Prince Edward Island- Nceda ubhekisele kwiMimangaliso kwiSikhokelo sabahambi se-Polly esinikezelwe kwisiza ngeenkcukacha ezingcono malunga neelwandle zendawo, iindawo zokutyela, iingcebiso kunye neendawo zokusingwa.
Sinokufumaneka okanye singafumaneki njengoko sifuna. Ndineendwendwe / abatyeleli / isikhokelo sokuzonwabisa kwisiza! Ubomi bam bonke bendisebenza kwindawo yokwamkela iindwendwe. Ndiyabakhathalela abantu kwaye ndibanqwenelela okuhle ngokunyanisekileyo. Ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukunceda ukuhlala kwakho kunye naphezu kwayo yonke iholide kuyo nayiphi na indawo nceda undazise. Kwakhona sivakalelwa kukuba kubalulekile ukukhankanya ukuba usapho lwethu lunenkampu nzulu emahlathini kwindawo yeehektare ezine, ukusuka emlanjeni kufutshane nendlela. Sichitha ixesha apho kanye kwaye ixeshana ehlotyeni :)
Sinokufumaneka okanye singafumaneki njengoko sifuna. Ndineendwendwe / abatyeleli / isikhokelo sokuzonwabisa kwisiza! Ubomi bam bonke bendisebenza kwindawo yokwamkela iindwendwe. Nd…